Endrika Toy Inona No Ahitan’Ireo Tantsaha Mpila Ravinahitra Ny Lalantsara Fivarotam-bokatr’ireo Toeram-pivarotana Goavana Amerikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Febroary 2015 9:45 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, 日本語, Nederlands, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, English
Sary an'i rick, mpampiasa Flickr CC BY 2.0
Ity lahatsoratra ity sy ny tatitra iray tamin'ny onjampeo nataon'i Monica Campbell ho an'ny The World dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 4 Febroary 2015 ary averina avoaka ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizaràna fizaràna votoaty .
Tao amin'ny lalantsara fivarotam-bokatry ny toeram-pivarotana goavana iray tao Madera, ao Central Valley amin'ny faritra ambanivohitra ao California, nanara-maso ireo voankazo sy legioma aranty eny an-dalantsara i Francisco. Lehilahy vaventy 40 taona izy. Tsy manana antontan-taratasy koa, ary nangataka mba ho ny fanampin'anarany ihany no ho ampiasaina.
Nandritry ny taona maro, naka ireo vokatra avy any Meksika symanerana ny morontsirka andrefan'i Etazonia izy. Hainy tsara izany, saingy misy zavatra iray miranty eto izay tsy noheveriny mihitsy indray ny hiotàzana azy: ny voatabia.
Io no vokatra izay “isan'ny mandreraka anao indrindra,” hoy izy. Mavesatra ny voatabia ary tsy maintsy miondrika ianao maka azy. Tsy maintsy mijery tsara azy ny voatabia tsirairay koa ianao mba hahazoana antoka ny lokony. Sarotra ny hiasa haingana.
Ambonin'izay, mikorontana izy ireny. “O rangahy ity, avelanao haloto ny saha. Mandoto izao zavatra rehetra izao ireo ravina maitson'ny voatabia sady asa miforeadretaka,” hoy i Francisco.
Avy eo dia misy indray ny zavoka — henjana ihany koa. Any Meksika i Francisco no maka azy ireny. Rehefa mijery azy ireo izy dia misaina zavatra mavesatra saingy mila kenakenaina.
“Mila mahazo antoka ianao hoe nioty azy ara-potana, ilay izy tsy diso masaka loatra na mantamanta,” hoy izy. “Ary raha atontanao izy ireny dia simba, na dia mbola tsara jerena eo amin'ny tany eo.”
Tsaroany tsara ny lanjan'ny zavoka rehefa injay mahafeno ny sobiky iray lanjain'ny mpioty izay mifatotra manodidina ny soroka — eo amin'ny 50 pounds eo ny sobiky iray. Ary rehefa feno iny, mila miondrika moramora ianao, mandraraka moramora ireo zavoka ho ao anatin'ny daba mba tsy hahasimba azy.
Avy eo, noresahan'i Francisco ny tongolobe, fotsy sy malama.
“Manahirana ny tongolobe satria tsy maintsy miondrika ambany be ianao, misikotra azy ao anaty tany,” hoy izy. Tsy maintsy esorinao ihany koa ny volombavany, na ny la barba. “ilay ampahany misy volombolony matroka ery ambony amin'ny tongolobe iny. “Mampiasa hareza kely izahay hanapahana azy ireny, ary tsy maintsy mitandrina mba tsy hanimba ilay tongolobe. Asa averimberina io ary mahatorovana ny tànanao. Mila manetsiketsika ny rantsan-tànako aho mandritry ny alina tontolo mba ho azo antoka fa ho vonona sy afaka ny hiasa indray izy ireo ny ampitson'iny.”
Ny inona no tena tiany ny miasa azy — ny zavoka sa ny tongolobe?
“Ny zavoka,” hoy izy namaly avy hatrany. Aleony lavitra mihanika tohatra mandritry ny andro toy izay hiondrikondrika amin'ny tany eny anelanelan'ireo tandavanà fambolena. Saingy ny fianjeran'ny tohatra — manana halava efa ho 30 mandingana — mety ho henjankenjana ihany.
Avy eo hitan'i Francisco ny zavatra tena tiany horesahana: ny frezy. Fihetsehampo mifangaro no ao anatiny momba azy ity.
Lazany fa ny zavatra tena ilàna fitandremana indrindra dia ny fanesorana ny tahony sy ny ravin'ny frezy, nefa tsy manimba ny voa. Ary isanisany amin'ilay voankazo no tsy maintsy voatsirika mba hahazoana antoka fa tsy maitso loara ilay izy. Nefa efa nandritry ny fotoam-pambolena maro izy no naka frezy avy any Washington sy nifehy azy io. Efa vitany amin'izao ny mitango amin'ny tànana roa miaraka, mahazo frezy maherin'ny 50 pounds isan'ora. Ny fiasàna malaky dia midika fahazoana mismisy kokoa ambonin'ny karama isan'ora farany ambany indrindra — $7.16 fony izy niasa tany Washington.
Fa misy vidiny koa ny fiasàna malaky mandritry andro enina ao anatin'ny herinandro eny an-tany fambolena frezy.
“Mipetraka ianao, miondrika foana. Tsy tiako izany,” hoy i Francisco. Valaka ny tongotra sy ny lohalika, ary tsy afaka miasa izy amin'izao fotoana izao; narara teny an-tsaha izy. Nefa niteny izy fa mbola te-hioty indray.
“Ireharehàko ny asako,” hoy izy. Maka bahana kely izy sady mijery iretsy vokatra, toy ny mpanakanto iray manoloana hosodoko. Tiany ery ny mahita irto vokatra mitovy loko, na dia lafobe tsy ho voavidiny vola aza ny ankamaroany. Saingy tsapany ho mendrika izany ireo asa mafy natao hahatongavana amin'izao endriny izao.